साहित्य – Page2– खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
असोज ११, काठमाडाँै । प्रा. घनश्याम कँडेल र महेश पौड्याल काठमाडाँैमा सम्मानित भएका छन् । नेपाल स्रष्टा समाजले आफ्नो बाह्रौँ साधारण सभाको अवसर पारेर उहाँहरुलाई सम्मान गरेको हो । यस वर्षको सुभद्राविश्वराज स्रष्टासम्मानबाट घनश्याम कँडेल सम्मानित भए..
टेक्सास - अमेरिकी नेपाली समुदायमा साहित्य बिधामा एउटा नौलो फड्को 'गजल उत्सव' ले आफ्नो रफ्तार बढाउंदै लगेको छ । साहित्यको सशक्त पाटो गजल बिधालाई अमेरिकी नेपाली समुदायमा जोड्न 'गजल उत्सव - १' बाट डालसबाट शुरु भएको अभियान दोस्रो भाग हुंडै अब सिन्सिनाटीमा 'गजल..
-अर्जुनराज पन्त भाइ मारेर नपुगेर गाइ नि मार्न थालेउ ! एकै चिहान पर्ने गरि भिरैबाट फालेउ। न त खा थिए तिम्रो बाली न त तिम्रो अन्न कस्तो आत्मा तिम्रो कठै जाओ मार भन्न ! थुनबाट दुध झर्दा सम्म तिनलाई दुहि खायौ भोको पेट लौरो लगाइ हलो तान्न लायौ ! पुरा भयो आफ्नो..
काठमाडौं, भदौ २० गते । नेपालको विकास प्रणाली, द्वन्द्व तथा शान्ति प्रक्रियामा लामो समयदेखि सशक्तरूपले कलम चलाउँदै आउनुभएका डा. विष्णुराज उप्रेतीलाई २०७६ सालको ‘प्रसिद्ध कँडेल स्मृति सहभागीमूलक विकास लेखन सम्मान’ प्रदान गरिने भएको छ । सम्मानपत्रसहित १०..
भर्जिनिया - अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मञ्च, अमेरिका र इन्टरनेशनल मिडिया एण्ड इन्टरटेन्मेन्ट हाउस, अमेरिकाको संयुक्त आयोजनामा आगामी सेप्टेम्बर १५ तारिख आइतबार अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा अग्रज कवि,साहित्यकार एबम गीतकार बसन्त चौधरीको बिभिन्न नौँ भाषामा..
-अर्जुनराज पन्त लुतो फाल्न पाको छैन तीज पो शुरु भयो, हेरेनन कि क्यालेन्डर कि चाड नै आघि गयो । जन्मास्टमी आएसंगै तीज पो लाउथ्यो पहिले, यति चाडै आउन थाल्यो के भएर अहिले । जन्मेकी खै अर्का कृष्ण असारैमा फेरि, मनायौ कि तीजलाई फेरि त्यहि तिथिलाइ हेरी । टोल..
- अर्जुनराज पन्त फुकालेर हरका लुगा धानका बिउले छोपी कोहिले ला छन् शिरै माथि बनाएर टोपी ! सम्मान हो कि, अपमान हो बिचित्रै छ आज हरको बस्त्र हटाएर बिउले छोप्छन् लाज ! खेतमा रोप्ने बिउ कठै होटल भित्र गा छ मनि प्लान्टको हाँगो सरि गमलामा ला छ ! गमलामै फूलोस फलोस..
ईम राना मगर 'उजाड' /साउदी अरब - साउदी अरबको राजधानी रियाद स्थित बथा शहरको रमाद होटेलको सभाहलमा ऐतिहासिक पहिलो बृहत् गजल बाचन मेहफिल सम्पन्न भएको छ। विभिन्न सामाजिक संघ सस्था राजनीतिक पार्टीका भातृ सङ्गठनका पदाधिकारी , समाज सेवी डिएक्सन परिबार तथा बिशिस्ट..
काठमाडौँ, असार २२ गते । नेपाल स्रष्टा समाजले योगमाया दिवसको अवसरमा समाज सुधारक तथा स्रष्टा योगमायाका नाममा स्थापना गरिएका दुई वटा सम्मान वितरण गरेको छ । योगमाया राष्ट्रिय नारी स्रष्टा सम्मान कवि कुन्ता शर्मालाई प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै योगमाया..
काठमाडौं, असार १२ गते । साहित्यिक पत्रकार सङ्घको आयोजनामा आज राजधानीमा “न्युयोर्कका नेपाली कवि र कविता“ कृतिको लोकार्पण सम्पन्न भएको छ । ब्याकुल पाठक र किशन सिंह धामीले सम्पादन गर्नुभएको कृतिको तारा–किशन फाउण्डेसनले प्रकाशन गरेको हो । कृतिमा न्यूयोर्क..